Dab Baabi'iyay Xeryo qaxooti oo ku kala yaala Boosaaso & Garoowe – SBC
Dab Baabi'iyay Xeryo qaxooti oo ku kala yaala Boosaaso & Garoowe
Inka badan 50 guri oo ku yaalay xero qaxooti oo ku taala magaalada Garoowe xarunta gobolka Nuugaal ayaa maanta uu baa bi’iyay dab xoogleh oo qabsaday
Guryahan oo badankood ka sameysnaa Baco iyo Kartoomo ayaa gebi ahaantoodba ku basbeelay dabkan, inkastoo aan ilaa iyo hada jirin warar xaqiijinaya in dabkaasi uu geystay khasaare Nafeed balse waxay xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadkii ku dhaqnaa xeradaasi qaxooti in ay kaga gubteen dhamaan wixii hanti u tiilay iyo xoolo ugu xirnaa guryahaasi.
Xeradan Qaxooti ee uu maanta dabku qabsaday waxay ku taalaa Duleedka magaalada Garoowe gaar ahaan inta u dhaxeysa isbitalka weyn ee magaalada garoowe iyo toga magaaladaas, waxaana lagu magacaabay xerada Kaam Shabeele, waxaana degenaa in ka badan 400 oo qoys
Ciidamada Amaanka Magaalada Garoowe ayaa waxay adkeeyeen intii ay masiibada dabku soconeysa Amaanka goobta, waxaana markiiba soo gaaray masuuliyiin ka socday Poic-ka Dowlada hoose ee magaaladaas, Hay’ado ay ka mid ahaayeen UNHCR iyo OCHA.
Dadweynaha ayaa dhankooda muujinayay gurmad ku aadan sidii loo demin lahaa dabka, waxaanu jawigu ahaa mid aad u buuq iyo qeylo badan iyadoo dadka barakacayasha ah ee ay soo gaartay dhibaataduna ay ku dhawaaqayeen codad murugo leh oo aad looga naxo.
Hooyo ka mid ah hooyooyinka ay Gurigii halkaasi ay ka degenaayeen uu ka gubtay islamarkaana 2 kamid ah caruurteeda ay gacmaha heysato ayaa u sheegtay SBC International in iminka aysan heysan meel ay harsadaan, seexdaana Habeenkii maadaama uu dabkani baa bi’iyay halkii hoyga u aheyd.
Madaxa Arimaha Bulshada ee Dowlada Hoose Garoowe oo goobta ku tagay Kormeer ayaa ugu baaqay dadka shacabka ah in ay gar gaar u fidiyaan dadkan ay dhibaatadu soo gaartay, ninkii bixiyaa kiilo Sunkor ah Ama Bariis ahna waa caawin muhiim u ah dadkani dhibaatada soo gaartay.
Dhinaca kale waxaa isla Maanta Magaaalda Boosaaso ka dhacday dhacdo gubasho Ceynkaas oo kale ah, taas oo uu dab qabsaday Xero Qaxooti oo iyana ku taala Magaalada Boosaaso islamarkaana lagu magacaabay SHabeele .
Dabka oo ku bilowday dar dar xoogleh, caawina ka helayay Dabeyl xoogan oo saaka ka dhaceysa magaalada ayaa bas beeliyay tiro Guryo kor u dhaafaya 100 oo ka sameysnaa Baakado islamarkaana ay degenaayeen dad soo barakacay.
Qaar ka mid ah dadka soo barakacay ayaa sheegay in xiliga uu dambku bilaabanayay ay ka maqnaayeen guryahooda, iyagoona ku maqnaa sidii ay nolol maalmeedkooda uga soo saaran lahaayeen suuqyada magaalada .
Ma jiraan khasaare nafeed uu sababay dabkani Balse waxaa uu Dambas ka dhigay guyahaasi iyo hantidii yareed ee u tiilay dadkan qaxootiga ah, waxayna ka dalbadeen cid lalaa cidii wax la soo gaarikarta in ay u baahan yihiin gar gaar deg deg ah.
Dhacdooyinka Gubashada ah ee qabsata xeryaha Qaxooti ee dalka ayaa noqday kuwo sanad walba soo laalaabta gaar ahaan magalada Boosaaso, waxaana taasi loo sababeynayaa Taxadar la’aan ka timaada qoysaska dabka ku shita halkaasi iyo aqaladooda oo ka sameysan waxyaabaha u nugul dabka iskina dhow dhow badigood, taasina waa midka keenta in la bad baadin kari waayo oo uu dabku dambas ka wada dhigo.